MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward FAQs MM - MPT Myanmar | Moving Myanmar Forward
1. MPT ဆင်းမ်ကတ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိပါသလား။
• MPT ဆင်းမ်ကတ်များသည် ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းတိုးမြင့်သွားမည်ဖြစ်သည်။
• တစ်ကြိိမ်ဖုန်းငွေဖြည့်တိုင်း ဆင်းမ်ကတ်သက်တမ်းသည် တစ်နှစ်သို့တိုးမြှင့်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
• တစ်နှစ်အတွင်းဖုန်းငွေဖြည့်မှုမရှိပါက ( သို့မဟုတ် ) ရက်၉၀အတွင်း Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဖြင့်ဖုန်းငွေလက်ခံရရှိမှုမရှိသော ဆင်းမ်ကတ်သည် အဆိုပါကာလနောက်ပိုင်းတွင် ရက်၃၀ ကြာအခြားဖုန်းနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်မည်မဟုတ်ပါ။
• ယင်းရက်၃၀ကြာကာလပြီးနောက် ဖုန်းငွေဖြည့်မှုမရှိပါက ( သို့မဟုတ် ) Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဖြင့်ဖုန်းငွေလက်ခံရရှိမှုမရှိပါက အခြားဖုန်းနံပါတ်များသို့ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုနှင့် အဝင်ဖုန်းလက်ခံမှုများကို ရက်၆၀ ကြာပြုလုပ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။
• ယင်းရက်၆၀ကာလကြာပြီးနောက်ပိုင်းတွင် ဆင်းမ်ကတ်ကို ဆက်လက်အသုံးပြုနိုင် တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ရက်၆၀နောက်ပိုင်းတွင် ဖုန်းငွေဖြည့်ခြင်း ( သို့မဟုတ် ) Balance Transfer ၀န်ဆောင်မှုဖြင့်ဖုန်းငွေလက်ခံရယူခြင်းပြုလုပ်ပါကလည်း ဆင်းမ်ကတ်ကို ပြန်လည်အသုံးပြုနိုင်တော့မည်မဟုတ်ပါ။နီးစပ်ရာ MPT Brand Shop များတွင် ဆင်းမ်ကတ်အသုံးပြုခွင့်ပြန်လည်လျှောက်ထားရယူပါ။
2. MPTမှာ ဘယ်လို Voice Package တွေရှိတာပါလဲ။
– MPTသုံးစွဲသူများကြိုက်နှစ်သက်ရာကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူနိုင်စေရန် Voice Package အမျိုးအစား(၃)မျိုးကို MPTမှ မိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။ Voice Pacakage များက်ုအသုံးပြုခြင်းဖြင့် သုံးစွဲသူများသည် MPT ဖုန်းများသို့ခေါ်ဆိုပါက တစ်မိနစ်လျှှင် ၆ကျပ်အထိသက်သာသောနှုန်းထားများသာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပါသည်။
10mins Pack 40mins Pack 65mins Pack
မိနစ် ၁၀ မိနစ် 40 မိနစ် ၆၅ မိနစ်
– Package စျေးနှုန်းများတွင် ကုန်သွယ်ခွန်ပါ၀င်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
3. MPT ဆင်းမ်ကတ်မှာ သက်တမ်းကုန်ဆုံးရက်ရှိပါသလား။
4. MPTရဲ့ Unlimited Voice Pack ကို ဘာ့ကြောင့်ရပ်နားလိုက်တာပါလဲ။
– MPTအနေဖြင့် Unlimited Vocie Packအစီအဉ်ကိုရပ်နားလိုက်သော်လည်း MPTအချင်းချင်း ဖုန်းခေါ်ဆိုရာတွင်အသုံးပြုနိုင်မည့် မိနစ်၄၀ပက်ကေ့ချ် (၂၄၉ကျပ်) နှင့် ၆၅မိနစ်ပက်ကေ့ချ် (၃၉၉ကျပ်)တို့ကို အသစ်ထပ်မံမိတ်ဆက်ပေးထားပါသည်။
– ဖော်ပြပါ Packageစျေးနှုန််းများတွင် ကုန်သွယ်လုပ်ငန်းခွန်ပါ၀င်ထားပြီးဖြစ်ပါသည်။
Coca Cola MPT Refresh Top Up
SIM Swap Promotion
Default Language ပြောင်းလဲခြင်း
Auto Internet Service
ETop up Services
MY MPT USSD Menu
Swe Thahar Default
MPT ၏ သန့်ရှင်းပြည့်ဖြိုးရေအကျိုးအစီအစဉ်
Base Tariff Internet
Special Offer (သင့်အတွက်သာ)
Social Pack Promotion
New Data Carry
Xperia XA1 Plus and XZ1
MPT Voice Pack
လိုတရ Web portal
“Yu Htar” service
Transactions and amounts
MPT4U SIM Registration
Qiuck Check SIM Registration